Oriri Mmiri Efu
■ Ọ dịghị Chemical Dosing chọrọ.
■ Enweghị nkwụnye ego / Limescale na Fins / Tube.
•Ihe owuwu: Tubes nke ọla kọpa na aluminom nku.
•Otu ihe dị iche na njiri mara ikuku anyị bụ ike ya. Ezubere iche tumadi na ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ha ga-ahụrịrị arụmọrụ kachasị na iguzogide oge ịgba ọsọ na oke ọrụ ọnọdụ.
•A na-eji ogwe ma ọ bụ profaịlụ nke galvanized ígwè nwere ọkpụrụkpụ nke 2 ma ọ bụ 3 mm wuru akụkụ niile nke na-arụ ọrụ dị ka nkwado ma ọ bụ etiti na eriri igwe, yana nkwado nke usoro fans.
•Thekwụ ma ọ bụ ụkwụ nke arịlịka dum na-wuru na 4 mm oké galvanized mpempe akwụkwọ profaịlụ.
Pọrụ mmiri nke Ọrụ: Igwe oyi na-eji ikuku ikuku iji mee ka mmiri dị n'ime eriri ahụ dị jụụ. Mmiri na-ekpo ọkụ na-efunahụ ikpo ọkụ ya na tube Ọla kọpa na ntù enyere iji mee ka Mpaghara Nyefee Okpomọkụ.
Ndị Fans na-akpali ma ọ bụ na-amanye, ikuku Ambient n'elu ngwugwu Finned Coil, nke na-eburu okpomọkụ sitere na mmiri ahụ wee gbasaa na mbara igwe.
N'ihe banyere ndị na-agba ume na-eme ka eriri ọkpọ ahụ dị n'okpuru onye ofufe ahụ. Onye ofufe ahu na-echekwa finned tube iji belata mmetụta nke ìhè anyanwụ, ifufe, ájá, mmiri ozuzo, snow na akụ mmiri ígwé, nke mere na ikuku-mma ngwa oru nwere ike okpomọkụ nyefe arụmọrụ; n'otu oge ahụ, ọ nwere ike ọbụna kesaa ikuku na obere mkpọtụ.
Bụrụ na nke mmanye draft fans ahụ tube ùkwù dị n'elu Fans. Okwesiri maka itinye usoro usoro okpomoku di elu, odi nfe idocha ma dozie ya, obere mmezi ya na ike oriri di ala.
Igwe oyi na-eji ikuku dị ka ọkara jụrụ oyi abụghị naanị nhọrọ nke obere ego na ụgwọ ọrụ dị ala, kamakwa nhọrọ nke ịchekwa oke mmiri, belata mbibi nke nsị ụlọ ọrụ na ichebe gburugburu ebe obibi.
•LNG •&Gwè na ígwè
•Mmanụ ala •Ike
Nke gara aga: Mepee Steeldị Igwe Na-eme Ka Mmiri Ghaa - Cross Flow
Osote: Ngwakọ ngwakọ
Kacha mma Evaporative Air oyi
Bonaire Evaporative oyi
Costway ikuku oyi
Evaporative ikuku oyi
Industrial Evaporative Air oyi